Choputa akwa ohuru nke Easteros na Google | Gam akporosis
Nke a bụ ihe na - eme mgbe ị Google Thanos
Ọ bụrụ n’onwere ihe nkiri a na-echesi ike, ọ bụ ndị na-akwụ ụgwọ: Endgame. Maka nke a, Google chọkwara ịkwụ ụtụ maka ihe ga-abụ ihe nkiri ikpeazụ Avengers. Kedụ ka ị chọrọ si nye ụtụ maka ihe nkiri ọhụụ a? Companylọ ọrụ ahụ kpebiri iju ndị ọrụ anya site na iwebata Easter Easter ọhụrụ. Ọ bụ ezie na ọ bụghị naanị onye ọ bụla. Ma anyị na-eche ihu nke zuru oke maka ememme ahụ.
Ebe ọ bụ ọ bụ Thanos Easter Egg. Greatzọ dị mma Google chọrọ iji mee ememme nke ndị na-abọ ọbọ: Endgame, nke ga-abụ nnukwu ihe ịga nke ọma na ihe nkiri n'afọ a. Kedụ ka ụlọ ọrụ siri webata akwa ọwụwa a?
Google enweela obi uto iji akwa akwa ndia na ihe nyocha ya. Ugbu a, anyị hụrụ onye raara nye onye ọ bụla ọzọ karịa Thanos. Na mgbakwunye, olee otu ọ ga - esi bụrụ nke ọzọ, ụlọ ọrụ ahụ hapụrụ anyị ụfọdụ ihe ịtụnanya na nke a. Ebe ọ bụ na akwa Ista dị ka nke a dị oke mkpa, dịka ị nwere ike ịchọpụta na vidiyo ahụ.
Gbalịrị iji nke a Thanos Easter Egg na Google? Ọ bụ n'ezie a na-akpali nnọọ mmasị na anya maka akụkụ nke ụlọ ọrụ ahụ. Ihe ọchị na nke mbụ, ebe ọ bụ na ọ nweghị onye na-atụ anya ihe akwa Ista a nwere ike. O doro anya na ihe karịrị otu atụwo gị na mberede!
Amabeghị oge ole akwa Ista a ga-adị na igwe na mbinye aka mbinye aka. Yabụ ọ bụrụ n'ịchọrọ ịchọpụta ihe ọ bụla ọ nwere ike ime, ị ga-adị ọsọ ọsọ ma ghara ịhapụ ohere a. Ebe ọ bụ na ọ dị ka ọ gaghị adị na ntanetị maka ogologo oge. Na vidiyo ị nwere ozi niile gbasara ya.
Site na ụtụ a na-adọrọ mmasị, a na-eme ememe nke ndị na-abọ ọbọ: Endgame na-eme ememme, nke dị na ụlọ ihe nkiri. Ihe nkiri nke na-enweghị obi abụọ na nde mmadụ na-eche. Kedu ihe ị chere gbasara nke a Thanos Easter Egg nke Google jiri?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nke a bụ ihe na - eme mgbe ị Google Thanos
OnePlus 7 Pro kwadoro ịnwe ese foto azụ atọ
PGA TOUR Golf Shotout dị ka arcade iji egwu golf megide ndị egwuregwu ndị ọzọ